Ciidan gadoodsan oo xanibay isku socodka deegaanada Puntland – Hornafrik Media Network
Ciidan gadoodsan oo xanibay isku socodka deegaanada Puntland
Cutubyo ka tirsan ciidanka Daraawiishta maamulka Puntland ee loo yaqaanno Guuto Bari, ayaa maanta gadood ka sameeyay laamiga u dhexeeya deegaanada Carta iyo Carwo ee gobolka Bari.
Ciidankan gadoodka sameeyay ayaa la sheegay inay ka cabanayaan mushahaar la’aan, waxayna xanibaad ku soo rogeen is ticmaalka laamiga dheer ee xiriiriya magaalooyinka waaweyn ee Puntland, sida Boosaaso iyo Garowe, taasi oo culays badan ku keentay gaadiidka iskaga gudba inta badan gobolada Puntland.
Saraakiisha hoggaaminaysay ciidankaas, ayaa ku wargeliyey gaadiidleyda inaysan ka gudbi doonin isbaaro ay halkaasi dhigteen, tan iyo inta laga siinayo xuquuq iyo mushahaar kaga maqan xukuumadda Puntland.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Puntland oo ku baxay halka ay wadada ka xirteen ciidankaas ayaa saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka ka dalbaday inay isbaarada ka qaadan laamiga, si wada-hadal loola furo, balse saraakiisha ayaa diiday dalabka odayaasha.
Ciidamada gadoodsan ayey weli u xirantahay wadadaas oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka deegaanada Puntland, waxaana halkaas ku xanniban gaadiid badan oo sida shixnado iyo rakaab kala duwan.
Gadoodka ciidamadaas ka tirsan Daraawiishta Puntland ayaa ku soo beegmaya, xilli ay dhawaan wasaaradda maaliyadda Puntland ay sheegtay, inay bil kasta bixin doonto mushahaaraadka ciidamada iyo dhamaan shaqaalaha kale ee dowladda.
Xukun lagu riday 5 qof oo loo heysto dilkii Weriye Jamal Khashoggi